यो घरमा भएको थियो गोंगबु विभत्स घटना, प्रहरीले गर्‍यो सिल ….(भिडियो सहित) «
यो घरमा भएको थियो गोंगबु विभत्स घटना, प्रहरीले गर्‍यो सिल ….(भिडियो सहित)
Published : 11 August, 2020 9:06 am
आइतबार गोंगबु गणेशस्थान नजिकै सुटेकेशमा टाउको विनाको शव नजिकैको घरबाट ल्याइएको तथ्य खुलेको छ । सुटकेश फेला परेको स्थानबाट ५० मिटर पर रहेको घरबाट शव ल्याइएको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी ईश्वर कार्कीले घटना भएको घर फेला परेको जानकारी दिँदै प्रहरीले सो घरलाई सिल गरेर अनुसन्धान तथा सोधपुछ थालेको बताए ।
आइतबार सुटकेशमा शरीर र केही पर झोलामा टाउको फेला परेका व्यक्ति दाङका कृष्ण बहादुर बोहोरा भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
उनी नयाँ बजार क्षेत्रको एक उद्योगमा काम गर्ने गरेका थिए । आइतबार विहान स्थानीयले कालो सुटकेशबाट रगत बगेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
प्रहरी टोलीले सुटकेश खोलेर हेर्दा टाउको नभएको शव फेला पारेको थियो । क्रुर र विभत्सरुपमा भएको घटनामा टाउको बाहेको शव सुटकेशमा फेला परेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय घटनास्थलमा जम्मा भएका थिए ।
उच्च अधिकारीसहितको ठूलो संख्यामा प्रहरी घटनास्थलमा परिचालन गरिएको थियो भने तालिम प्राप्त कुकुरलाई पनि अनुसन्धानका लागि घटनास्थल लगिएको थियो । सुटकेशमा टाउको विनाको शव फेला परेसँगै प्रहरीले शव पहिचान र टाउकोको खोजी गरेको थियो ।
अनुसन्धानका लागि घटनास्थल लगिएका तालिम प्राप्त कुकुरले सुटकेश फेला परेको भन्दा ३ सय मिटर पर जेब्रा झोलामा टाउको फेला पारेको थियो । टाउको र शवलाई आइतबार नै पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पताल लगिएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको हत्याको कारण र हत्यारा बारे खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।